Vaovao - Ahoana no handaminana ny firafitry ny orinasa?
Tsy ny hivarotra ny masinina amin'ny mpanjifa ihany no tokony hivarotantsika ny mpanjifantsika, fa ny hampiditra ny mpanjifanay amin'ny vahaolana mahomby sy mahomby, izay manampy amin'ny filan'ny indostrialy maoderan'ireo mpanjifantsika sarobidy.
Raha vantany vao nanapa-kevitra ny mpanjifa fa hampiasa vola amin'ny fananganana orinasan-varavarankely sy varavarana dia mila safidio ny tranokala mety. Ity misy lisitra entana sasany ho an'ny mpanjifa.
1.1 Haben'ny vavahady fidirana
Ny vavahady fidirana dia tokony ho 13 metatra ny sakany farafahakeliny ary efa ho 13 metatra ny hahavony.
1.2 haben'ny orinasa
Ny velarana takiana farafahakeliny dia 3000 metatra toradroa.
1.3 Tariby herinaratra sy zotra an'habakabaka
Ny compressor iray dia takiana isaky ny masinina voafantina fantsom-piterahana feno manerana ny orinasa mba hamaranana ny milina amin'ny tariby elektrika.
Entana farafahakeliny 3 farafahakeliny ho an'ny fametrahana dia 12-15 kw. Hanapahan-kevitra ny amin'ny masinina ampiasanao amin'ny fotoana mitovy.
Ny teboka masinina rehetra dia tokony hohatsaraina amin'ny switch MCB miaraka amin'ny tariby mety.
1.5 Indikator herinaratra dingana telo
Alamino ny dingana 3, indraindray noho ny tsy fahombiazan'ny herinaratra, tsy hita ny dingana iray, raha toa ka miasa milina isika amin'izany fotoana izany dia ho may ny motera.
Ny layout dia misy ny fizarana habaka sy ny fandaminana fitaovana ho an'ny fomba izay ahena ny vidin'ny asa amin'ny ankapobeny.
2.1 Faritra fitehirizana profil & fanamafisana
Rehefa avy niditra avy teo am-bavahady: STORAGE STAND AREA ho an'ny piraofilina & fanamafisana.
Size: 18 metatra -22 metatra ny halavany, 8 metatra -12 metatra ny halavany, ny sakany dia azonao atao ny manapa-kevitra.
2.2 Faritra fitahirizana vera
Mila mametraka karipetra malefaka amin'ny habakabaka amin'ny vera manohina.
2.3 Mamory ny velaran'ny latabatra
Mila mametraka karipetra malefaka ambonin'ny latabatra. (eo afovoan'ny orinasa)
2.4 Faritra fitahirizana fitaovana
Raha manana toerana malalaka ianao dia tsara kokoa ny manamboatra fitahirizana fitaovana ho efitrano misaraka noho ny fitaovana kely. Ilaina koa ny mijoro.
Raha tsy manana efitrano misaraka ianao dia ampiasao boaty mihidy mba hitazomana tsara ny entana madinidinika.
2.5 Modely compresseur rivotra
Ho an'ny fisafidianana ny compresseur rivotra
Raha hividy milina napetraka iray ianao dia apetraho ireo singa 5-6, azonao atao ny misafidy compresseur rivotra 5HP.
2.6 Fametrahana milina